Tuesday September 19, 2017 - 07:38:52 in Wararka by Super Admin
Filimkan oo la daawan karo muddo dhowr iyo labaatan daqiiqo ah ayaa ugu horeyn waxaa ka soo muuqanayaCabdallah Talaal Muuse oo 28 jir ah, kana soo jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Jaajuuskan oo sanadkii 2010-kii yimid Soomaaliya ayaa sheegay in uu la soo xiriiray nin lagu magacaabo Battaar oo ka guutada ATPU ee sirdoonka Kenya sanadkii 2012-kii, islamarkaana uu ku tashkiiliyey in uu jaajuus noqdo, isagana uu ku qancay.
Howsha ugu muhiimsan ee Cabdullaahi laga doonayey waxay ahayd in uu soo gudbiyo sawirada, magacyada iyo lambarada Telephone ee qaar ka mid ah Mujaahidiinta taas oo inteeda badan uu sameeyey.
"Waan u diray dhamaan Lambaradii iyo sawiradii uu iga dalbaday, waxaana ugu dhiibay haweeney uu ii soo dirsaday oo lagu magacaabo Safiya,Haweeneydan waa jaasuusad iska dhigta in ay tahay ganacsato, waxayna labada wadanba isaga kala gudbisaa oo ay u iib geysaa badeecado kala duwan. Sidoo kale waxay ka mid tahay mukhalasiinta sida dhuumaaleysiga ah dadka ku kala gudbiya” ayuu yiri. Jaajuus Cabdullaahi Talaal Muuse.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: "Waxaan siiyey Memory 8GB ah oo ay ku jiraan dhamaan macluumaadkii laga iga rabay oo uu la socdo Numberkii Batar. Markii ay Kenya tagtay, wey geysay Memory-ga, waxaana i soo wacay Batar oo ii sheegay in uu helay alaabtii aan u soo dhiibay, ka dibna wuxuu ii soo diray $300. Batar wuxuu horay iigu sheegay in uu isiin doono $200, oo ah abaalmarinta dalabka aan ku waafaqay ee ah in aan isaga la shaqeeyo, ka dibna uu ii bilaabi doono mushaar bil kasta ah oo $100.”.
Filimka Mu’asasada Al-kataa’ib waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay Jaajuus lagu magacaabo Cabdi Casiis Mukayo Omambia kaas oo sheegay in uu asalkiisa ahaa qof gaal ah balse goordambe qaatay diinta Islaamka. Wuxuu sanadkii 1985-kii ku dhashay Cheptiret sida uu sheegay.
Wuxuu sheegay in maalin maalmaha ka mid ah uu la kulmay wiil lagu magacaabo Isxaaq, kaas oo uu saaxiib ka dhigtay, ka dibna u soo bandhigay diinta Islaamka, isagana uu ugu dambeyntii ku qancay oo uu halkaas ku soo Islaamay balse wuxuu sheegay in goordambe uu Isxaaq u geeyey nin kale oo lagu magacaabo Cumar kaas oo ugu dambeyntii ku tashkiiliyey in uu ku biiro kooxda ATPU ee sirdoonka Kenya, isagana uu ku waafaqay.
Shaqada ugu muhiimsan ee la doonayey in uu qabto waxay ahayd in uu aado Soomaaliya si uu ugu biiro Mujaahidiinta Al-Shabaab, dhexdoodana kaga soo gudbiyo wixii macluumaad ah, Sidii ayuuna sameeyey. Wuxuu sheegay in Soomaaliya loo soo diray koox uu isaga ka mid yahay oo uu madax u ahaa nin lagu magacaabo Maxamed oo sidoo kalena loo yaqaano Cali Dheere.
"Cali Dheere wuxuu ahaa jaajuus ka tirsan APTU oo mas’uul ka ahaa shabakadeena markii aan imaanay halkan. Meeshan ayaa na loo soo diray anagoo wadano towjiihaad ah in aan dabagalno cutubyada mujaahidiinta ee abaabula ama fuliya weerarada ka dhacaya gudaha Kenya. Waxaa sidoo kale nalagu soo towjiihiyey in raadino goobaha laga heli karo hogaamiyeyaasha Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Aniga waxaan ahaa qofkii ugu horeeyey ee la soo diray, waajibkeygana wuxuu ahaa in aan asxaabta kale ku toosiyo wadada iyo qaabkii ay halkaan ku imaan lahaayeen. Ka dibna waxaan wacay Cali Dheere, wuxuuna noqday qofkii labaad ee yimid halkan” ayuu yiri.
Jaajuuskan ayaa sheegay in markii ay yimaadeen Soomaaliya ay u suuragali weysay howlihii shaqo ee loo soo diray, ka dibna ay isku dayeen in ay si dhuumaaleysi ah ku baxaan. Wuxuu tilmaamay in saaxiibkiisa Cali Dheere ay suuragashay balse isaga la qabtay xilli uu isku dayayey in uu baxo.
Filimka Mu’asasada Al-Kataa’ib waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay Jaajuus lagu magacaabo Hashim Cusmaan Shelali oo gudaha Mujaahidiinta looga yaqaanay Khaalid. Waxaa 27-kii September, 1981-kii uu ku dhashay magaalada Mombasa.
Jaajuuskan wuxuu sheegay in sanadkii 2012-kii ay la soo xiriireen Saraakiil jawaasiis ah oo la shaqeysa sirdoonada saliibiyiinta kuwaas oo raadinayey muhaajiriin British ah oo joogta Soomaaliya iyo qaabka ay Muhaajiriintu ku soo galaan Soomaaliya.
Haashim wuxuu si qoto dheer kaga sheekeynayaan xiriirka dhexmaray isaga iyo jawaasiista saliibiyiinta ee ugu dambeyntii keentay in xiriir wada shaqeyn oo dheer ay yeeshaan, macluumaad xasaasi ahna uu ku wareejiyey.
"Ka dib markii aan siiyey xogtaas, wuxuu maalintii xigtay ii soo diray $2653 dollar oo uu ii soo dhigay xawaaladda Dahabshiil. Lacagtii ayaan qaatay, waana iska ilaaliyey hadana in aan la xiriiro muddo saddex todobaad ah. Saddex todobaad ka dib, waan wacay waxaana u sheegay in mashruucii tababar ay arimo si ka noqdeen, aana dooneynin in aan ka qeybgalo. Waxaan ku xasiliyey in aan diyaar u ahay wada shaqeyn iyo wadahadal kasta oo dheeraad ah oo uu daneynayo” ayuu yiri.
Ku Daawo Live facebook
Hoos Ka Daawo Sawirada Jawaasiista